October 14, 2020 - Online Hartha
စတုတ္ထတန်းကျောင်းသား ငြိမ်းမောင်ရဲ့ ရည်းစားစာကို ဖတ်ရင်း ကျောတွေပါ ချမ်းသွားခဲ့တဲ့ ဆရာမလေး
October 14, 2020 by Online Hartha
စတုတ္ထတန်းကျောင်းသား ငြိမ်းမောင်ရဲ့ ရည်းစားစာဖတ်ရင်း ကျောတွေပါ ချမ်းသွားခဲ့တဲ့ ဆရာမလေး ဆရာမ သားကို ဖိုးထောင်ဖင်ချတယ်… ဟေ ငြိမ်းမောင် တိုင်လိုက်သည့်စကားကြောင့် ဆရာမ ငေါက်ခနဲ မတ်တပ် ထရပ်လိုက်သည်။ သူတိုင်လိုက်သည်ကိုတော့ အတန်းထဲမှ မည်သူမှ မကြားလိုက် ဖိုးထောင် လာစမ်း ဆရာမ ခေါ်လိုက်တော့ တစ်တန်းလုံး အသံတိတ်ပြီး ဖိုးထောင်အား စိတ်ဝင်တစားကြည့်ကြသည်။ ဖိုးထောင် ကား ကုတ်ချောင်းချောင်းနှင့် အတန်းရှေ့အရောက်၌ ငြိမ်းမောင် က သားကိုအရင်လုပ်တာ ဆရာမ သူက ဘာလုပ်တာလဲ သား ညီမလေး ကို ရည်းစား စာပေးတယ် ဟေ ဟုတ်လားငြိမ်းမောင် စတုတ္ထတန်းကျောင်းသား ငြိမ်းမောင်တစ်ယောက် နည်းနည်းတွန့်သွား၏ မှန်၏ သူရေးထားသော ရည်းစား စာက ဖိုးထောင်ညီမလက် ထဲသို့ ရောက်နေပြီဖြစ်သည်။ … Read more
သငျနဲ့ သငျ့မိသားစုအတှကျ သိထားသငျ့တဲ့ ငရုတျသီးခွောကျမှို အကွောငျး နှငျ့ ကွောကျစရာ ကနျြးမာရေးဆိုးကြိုးမြား
သင်နဲ့ သင့်မိသားစုအတွက် သိထားသင့်တဲ့ ငရုတ်သီးခြောက်မှို အကြောင်း… အရက်၊ ဘီယာ…မသောက်ဘဲ …အသည်းခြောက်ပြီး… သေစေနိုင်တဲ့ ငရုတ်သီးခြောက်မှို ငရုတ်သီးခြောက်မှို က ကြောက်စရာပါဗျာ မြန်မာ့ ဟင်း မြန်မာ့စားဖွယ်လို့ဆိုလိုက်တာနဲ့ ငရုတ်သီးအစပ်ဟင်းဆိုတာ လုံးဝပြေးမလွတ်ပါဘူး။ မြန်မာလူမျိုး တော်တော်များများက ငရုတ်သီး အင်မတန်ကြိုက်ကြတဲ့ လူမျိုးတွေဖြစ်ကြပါတယ်။တစ်နေ့တစ်နေ့ ဘာဟင်းပဲချက်ချက် အနည်းဆုံး အစပ်ဟင်းလေးတစ်ခွက်ကတော့ ပါလိုက်ရမှ။ ငရုတ်သီးတောင့် ၊ ငရုတ်သီးလေးစိပ်ခွဲ၊ အလှော်မှုန့် ၊ အစိမ်းမှုန့် ၊ အရောင်တင်မှုန့် စတာတွေကို ဆိုင်ကဝယ်စားရင်စား၊မဟုတ်ရင်လည်း အိမ်မှာသိမ်းထားပြီး စားတတ်ကြပါတယ်။ ဒါကြောင့် နေ့စဉ်ဟင်းချက်ရာမှာမပါမဖြစ် ဖြစ်တဲ့ ငရုတ်သီးမှာ ကပ်နေတတ်တဲ့ မှိုရောဂါ အကြောင်းကိုတော့ သိထားသင့် ဖို့လိုပါတယ်။မိသားစုတစ်စုရဲ့ ကျန်းမာရေးကို အဓိကတာဝန်ယူရတာက မီးဖိုချောင်ဖြစ်တာကြောင့် ကျန်းမာရေး အန္တရာယ်တွေ ပေးနိုင်တဲ့ ငရုတ်သီးမှိုအကြောင်းနှင့် … Read more
စြေးသညျ ရှေးတရုတျလူကွီး သူမတှေ ဆုံးမလရှေိ့တဲ့ စီးပှားရေးလမျးညှနျ (၁၇) ခကျြ…
ဈေးသည် ရှေးတရုတ်လူကြီးသူမတွေ ဆုံးမလေ့ရှိတဲ့ စီးပွားရေးလမ်းညွှန် ( ၁၇ ) ချက်… ၁ ။ ဆိုင်နေရာကောင်းခြင်းဟာ ဆိုင်ကြီးတာ ငယ်တာထက် ပိုအရေးကြီးပါတယ် ။ ၂ ။ ရောင်းကုန်ရဲ့ အရည်အသွေးဟာ ဆိုင်နေရာထက် ပိုအရေးကြီးနေတတ်ပြန်တယ် ။ ၃ ။ စကားချိုချိုသာသာ ဈေးရောင်းတတ်ခြင်းဟာ အရေးကြီးပါတယ်။ ဖောက်သည်ကို ပိုမြဲစေပါတယ် ။ ၄ ။ အရင်းအနှီး နည်းတာကို စိုးရိမ်ခြင်းထက်၊ ယုံကြည်မှု နည်းတာကို ပိုစိုးရိမ်သင့်ပါတယ် ။ ၅ ။ ဆိုင်ကို လှလှပပ ခင်းကျင်းတတ်ခြင်းဟာ အရေးကြီးပေမဲ့ နည်းနည်း ရှုပ်ပွနေတဲ့ ဆိုင်ငယ်ကလေးက ပိုရောင်းကောင်းနေတတ်ပါတယ်။ဈေးချိုတယ်ဆိုတာကို ဝယ်ယူသူများက ထင်မြင်သွားစေလို့ပါ ။ ၆ ။ ဝယ်သူကို … Read more
အရာအားလုံးဟာ ရောင်ပြန်ဟပ်စမြဲပဲလေ…(အရမ်းဖတ်ကောင်းတဲ့ ပညာပေး စာလေးတွေပါ)
အရမ်းဖတ်ကောင်းတဲ့ ပညာပေး စာလေးတွေပါ… ” ရောင်ပြန် ” ( ၁ ) တစ်နေ့မှာ လူတစ်ယောက်ဟာ chattingမှာ ခင်တဲ့ ကောင်မလေးနဲ့ချိန်းခဲ့တယ်။ အဲဒီကောင်မလေးကို သူ မမြင်ဖူးသေးတော့ အရုပ်ဆိုးဆိုးကောင်မလေး ဖြစ်မှာ စိုးတာနဲ့ သူ့ သူငယ်ချင်း တစ်ယောက်ကို ကောင်မလေးနဲ့ တွေ့ပြီး ၁၀မိနစ် အကြာမှာ သူ့ဟမ်းဖုန်းကို ဆက်ဖို့ မှာခဲ့တယ်။ ဒါမှ သူ လစ်ထွက်လို့ အဆင်ပြေမယ်လေ။ ဒီလိုနဲ့ ချိန်းထားတဲ့ နေရာ ရောက်တော့ ကောင်မလေး ချောချော ဖြစ်နေတာကို တွေ့လိုက်တယ်။ ဒါနဲ့ ဖုန်းမမြည်ပါစေနဲ့လို့ သူကျိတ်ပြီး ဆုတောင်းလိုက်တယ်။ ဒါပေမယ့် အဲဒီအချိန်မှာ မမျှော်လင့်ဘဲ ကောင်မလေးရဲ့ဖုန်းက မြည်လာတယ်။ ၂မိနစ်လောက် စကားပြောပြီး ကောင်မလေးက သူ့ဖက်လှည့်ပြီး … Read more
မွနျမာ လူမြိုး အမြားစုတှေ ဆငျးရဲစတေဲ့ အခကျြ (၃၇)ခကျြ…
မြန်မာ လူမျိုးအများစုတွေ ဆင်းရဲစေတဲ့ အချက်များ မြန်မာလူမျိုး အများစုတွေကို ဆင်းရဲစေတဲ့ အချက် (၃၇) ချက်ကို ဖော်ပြ ပေးလိုက်ပါတယ်။ ဖော်ပြထားတဲ့ အချက်တွေ တကယ် မှန်၊ မမှန် ဖတ်ကြည့်လိုက်ပါဦး ခင်ဗျာ (၁) မြန်မာအများစုက (TEAM WORK) အားနည်းတယ်။ မညီညွတ် ဘူး။ (၂) ဘေးကနေ သွေးခွဲရ လွယ်တယ်။ (၃) မနာလိုစိတ် များတယ်။ (၄) အချင်းချင်း ထဲ ကိုယ့်ထက် သာသွားမှာ မလိုလားဘူး။ သာရင်လည်း မနာလိုဘူး။ (၅) သူများကို ချီးကျူးရင် မကြိုက်ဘူး။ကိုယ့်တစ်ယောက်တည်းကိုပဲ ချီးကျူး စေချင်တယ်။ (၆) မုဒိတာ မပွါးနိုင်ဘူး။ (၇) ကြိုးစားရမယ့် နေရာတွေမှာ တက်တက်ကြွကြွ မရှိဘူး။ … Read more
အင်တာနက် သုံး ဖုန်းကြည့်တာ များလို့ မျက်ရိုး ကိုက်တတ်သူများနဲ့ မျက်မှန် သမားများအတွက် ဆေးနည်း
အင်တာနက် သုံး ဖုန်းကြည့်တာ များလို့ မျက်ရိုး ကိုက်တတ်သူများနဲ့ မျက်မှန် သမားများအတွက် ဆေးနည်း မျက်မှန်လွတ်စေတဲ့ မျက်ကြည် စားဆေး အသက် ( ၃၀ ) ကျော်မှပဲ မျက်စိ မကြည် ။ မှုန်ဝါးဝါးမို့ ဆရာဝန် ပြကြည့်တော့ အနီးကြည့် ပါဝါ ( +၁၅၀ ) ဒီဂရီ မျက်မှန် တပ်ခဲ့ရသည် ။ အခုအသက် ( ၄၀ ) ကျော် မှ မျက်မှန် လွတ်လေတော့ ထူးဆန်း နေသလို အများက ထင်ကြတော့သည် ။ ဆေးနည်း အချိုးအစား အတိုင်း လွယ်ကူစွာ ဖေါ်စပ်ရန် ဖြစ်လေသည် ။ ဆေးနည်း ( ၁ … Read more
အပူမြား နသေူမြား ၊ အပူတကျ နသေူမြား အတှကျ အမှနျတကယျ သကျသာစတေဲ့ နညျးလမျး
အပူများ နေသူများ ၊ အပူတက် နေသူများ အတွက် အမှန် တကယ် သက်သာစေတဲ့ နည်းလမ်း အပူတွေ အထက်တက်နေလား လွယ်လွယ်လေးပါ တကယ် လုပ်ကြည့်စေချင်ပါတယ်။ ပျောက်စေချင်လွန်းလို့ ပြန်တင်ပေးပါတယ်နော်။ အနည်းဆုံး သုံးရက် စမ်းဖြစ်အောင် စမ်းကြည့်ပါအုံး။ အပူထုတ်ပြီးရင်တော့ ရေမချိုးရတော့ဘူးနော်။ သတိထားအုံး။ အပူတွေ အထက်တက်နေလား လွယ်လွယ်လေးပါ။ အပူတွေအောင်းလို့ ဖနောင့် နာနေတဲ့အခါ ရိုးရိုးအပူအောင်းလို့ ခါးနာနေတဲ့အခါ ခြေထောက်ရေစိုလို့ အပူတွေ အပေါ်တက်ပြီး ခေါင်းကိုက်နေတဲ့အခါ အပူတွေ အပေါ်တက်ပြီး သွားနာနေတဲ့အခါ အပူအပုတ်အစပ်တွေများပြီး နေရထိုင်ရတာ မအီမသာဖြစ်နေတဲ့အခါ ခြေဖဝါးတွေ ကွဲနေတဲ့အခါ ဆရာလေး တွေ့ရှိထားတဲ့ နည်းအသစ်လေးကို အသုံးချပြီး သက်သာ ပျောက်ကင်းစေရန် တင်ပေးလိုက်ပါတယ်နော်။ ပြောရရင် ဆရာလေးက တော်တော်လေးကို လျှာရှည်တယ်။ … Read more
Facebook သုံးနေ တဲ့ မိန်းကလေး များ ဖတ်ရန် တကယ့်ဖြစ်ရပ် မှန် ဇာတ်လမ်းလေးပါ…
fbသုံးနေ တဲ့မိန်းကလေးများ ဖတ်ရန်ဖြစ်ရပ်မှန်ကို အနည်းငယ်သာပြောင်း၍ရေးပါသည် …. ။ တစ်နေ့ရုပ်ဖြောင့်ဖြောင့် လူလတ်ပိုင်းဓာတ်ပုံတင်ထားတဲ့ အကောင့်တစ်ခု မက်ဆင်ဂျာကနေညီမလေး အစ်ကိုစကားနည်းနည်း ပြောချင်လို့ ရလား “ဆိုပြီးစာဝင်လာတယ်။ အကူအညီတစ်ခုတောင်းချင်လို့ပါတဲ့ဟုတ်ကဲ့ လို့ရေးမိလိုက်တာနဲ့ဗွီဒီယိုကော ခေါ်တာခံလိုက်ရတယ်။ ရုပ်ဖြောင့်သလောက် အပြော ကောင်းလွန်းလှတဲ့သူ့ စကားတွေကြားမှာဖုန်းကို ပိတ်မပစ်ရက်အောင် ဖြစ်ခဲ့ရပါတယ်။ ”အပျိုလား” ဆိုတဲ့သူ့စကားကကျမကို နည်းနည်း တုန်လှုပ်စေခဲ့တယ်။ ခနလောက်ငိုင်နေပြီးမှကျမယောင်္ကျားနဲ့ ကျမ အတူတူတွဲရိုက်ထားတဲ့ ဓာတ်ပုံလေး တစ်ပုံ ပို့ပေးလိုက်တယ် ။ “ညီမတို့ ချစ်သူတွေလား “ဆိုတဲ့ မေးခွန်းလေးက ကျမကို ကြည်နူးသွားစေပါတယ်ဘေးနားမှာ အိပ်ပျော်နေရှာတဲ့သားလေးကိုမလုံမလဲ ကြည့်လိုက်မိတယ်ကျမယောကျား လူရိုးကြီးကတော့ယာတောကပြန်မလာသေးပါဘူး ကျမ ထင်လိုက်တာကတစ်ခါတည်းနားအေးအောင်ဆိုပြီး အမှန်ကိုချပြလိုက်တာမှ ပိုဆိုးသွားပါတယ် တိုတိုနဲ့လိုရင်းကိုပြောရရင်ကျမ တို့ နေ့တိုင်းဖုန်းပြောဖြစ်ခဲ့ပါတယ်။သူ့ဖုန်းမလာရင်ကျမကစခေါ်တတ်နေပါပြီကျမယောက်ျား လူရိုးကြီးကတောဘာမှမသိရှာပါဘူး။ သူ့ကတော့ ကျမကိုသိပ်ပြီးဂရုမစိုက်နိုင်ပါဘူးယာတော နဲ့အိမ် ကူးနေတာနဲ့သူ့ကျွဲတွေနဲ့တင် … Read more
သီလရှင် ကို အမျိုးသားတွေ ရှိခိုးသင့်ပါ သလား…?
သီလရှင်ကို အမျိုးသားတွေ ရှိခိုးသင့်ပါသလား? “သီလရှင်” စတင် ဖြစ်ပေါ်လာပုံ သမိုင်း အကျဉ်းကို အရင် သိထားဖို့ လိုအပ်ပါတယ်။ မြတ်စွာဘုရားရှင် လက်ထက်တော် အခါကာလမှာ မိထွေးတော် ဂေါတမီကို အကြောင်းပြုပြီး “အမျိုးသမီး သာသနာ” စတင်ပေါ်ထွန်းခဲ့ပါတယ်။ စာလိုပေလိုတော့ “ဘိက္ခူနီ သာသနာ” လို့ ခေါ်တာပေါ့။ အဲဒီသာသနာဟာ မြတ်စွာဘုရား ပရိနိဗ္ဗာန် စံဝင်ပြီး နှစ်ပေါင်း ငါးရာလောက်မှာပဲ အပြီးတိုင် ပျောက်ကွယ်ခဲ့ပါတယ်။ ဘာကြောင့်လည်း ဆိုတော့ အမျိုးသမီးတွေ မြတ်စွာဘုရားရဲ့ ဝိနည်းသိက္ခာပုဒ်တွေကို ထိန်းသိမ်းနိုင်သူ မိမိကိုယ်ကို ကာကွယ် စောင့်ရှောက်နိုင်စွမ်း ရှိသူတွေ မပေါ်ထွန်းတော့လို့ပါပဲ။ မြန်မာနိုင်ငံတွင် သာသနာနှစ် ( ၉၀၀-၁၄၀၀ )အတွင်းမှာ အမျိုးသမီးတွေ သာသနာတွင်း ဝင်ရောက်လာခြင်းမှ စ၍ ” သီလရှင်သာသနာ … Read more
ညအိပ်မပျော်တဲ့ရက်တွေ များလာရင် သင့်ခန္ဒာကိုယ်ထဲမှာဖြစ်လာမယ့် ကြောက်မက်ဖွယ်ရာ ဆိုးကျိုးများ
လူတိုင်းလိုလိုဟာ ဘဝမှာ တစ်ခါတော့ ညအိပ်မပျော်ခြင်းကို ခံစားရတတ်ပါတယ်။ ညအိပ်မပျော်ခြင်းကို ဖြစ်စေသော အကြောင်းရင်းများစွာရှိပါတယ်။ ကမ္ဘာ့လူပေါင်းသန်း၆၀လောက်ဟာ နာတာရှည်ညအိပ်မပျေ်ာခြင်းကို ခံစားနေရတယ်လို့ဆိုပါတယ်။ ညအိပ်မပျော်ခြင်းဟာ ရက်အနည်းငယ်ကနေ နှစ်ရှည်လများအထိ ကြာမြင့်တတ်ပါတယ်။ ရေရှည်ညအိပ်မပျော်တဲ့အခါ ဘာတွေခံစားရမလဲ (1)အက်ဆီးဒန့်များကို ဖြစ်စေခြင်း အိပ်ရေးမဝသောကြောင့် စွမ်းအင်နည်းပါးပြီး နုံးခွေလာတတ်ပါတယ်။ထိုအခါ ကားတိုက်မှုများဖြစ်ပေါ်စေတာ သိကြမယ်ထင်ပါတယ်။ အမေရိကန်ပြည်ထောင်စုတွင်အိပ်ငိုက်ခြင်းကြောင့် ဖြစိသော ကားတိုက်မှုပေါင်း ၁သိန်းကျော်နဲ့ သေဆုံး မှုပေါင်း ၇ထောင်ကျေ်ာ ရှိပါတယ်။ (2)ဉာဏ်စွမ်းရည်လျော့ကျခြင်း တွေးခေါ်ခြင်း၊သင်ယူခြင်းနဲ့ဆောင်ရွက်ခြင်းတို့အတွက် အိပ်ရေးဝဖို့ လိုအပ်ပါတယ်။အိပိရေးပျက်ပေါင်းများပါက အာရုံမစိုက်နိုင်ခြင်း၊တက်ကြွမှုမရှိခြင်း၊နဲ့ လုပ်ငန်းခွင်ပြဿနာများ ကြုံတွေ့ရတတ်ပါတယ်။ (3)ရာဂါဆိူးများ ဖြစ်ပေါ်စေခြင်း လေ့လာချက်များအရ ညအိပ်မပျော်သူ ၉၀ရာနှုန်းဟာ အောက်ပါ ရောဂါများကို ခံစားရတယ်လို့ဆိုပါတယ် ဆီးချိူရောဂါ နှလုံးတုန်ခြင်း သွေးတိုးခြင်း နှလုံးအားနည်းသောရောဂါ လေဖြတ်ခြင်း (4)အရွယ်မတိုင်မီ အိုမင်းရင့်ရော်ခြင်း နေ့စဉ်အိပ်ရေးပျက်ခြင်းကြောင့် … Read more